Muhaajiriin lix maalmood la hortaagnaa oo ka degey talyaaniga | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Muhaajiriin lix maalmood la hortaagnaa oo ka degey talyaaniga
Muhaajiriinta oo ku xannibnaa markab joogay dekedda Sicily muddo lix maalmood ah ayaa loo ogolaaday inay ka soo degaan, taasoo soo afjartay ismari waagii u dhaxeeyey xukuumadda Talyaaniga iyo dalalka kale ee ku jira Midowga Yurub.
Talyaanigu wuxuu diiday inuu ogolaado in muhaajiriintaas badankood ay soo degaan, ilaa iyo inta xal laga gaarayo halka la gaynayo.
Goor dambe oo Sabtidii ah ayaa wasiirka arrimaha gudaha, Matteo Salvini, wuxuu shaaca ka qaaday in tiro baadariyaal ah ay ogolaadeen in ay qaabilaan.o
Mr Salvini ayaa waxaa ku socda baaritaan ku saabsan kaalinta uu ku leeyahay ismari waaga.
Dacwad oogeyaasha Sicily waxay fureen baaritaan ku saabsan go’doomin qayrul sharci ah, xarig aan sharciga waafaqsanayn, iyo awoodda oo uu si xun u isticmaalay.
Waxa ay mudan doonaan 140 muhaajiriin ah, kuwaasoo badidood u dhashay Eritrea, ayaa dhalisay dibadbaxyo gudaha Talyaaniga ka dhacay todobaadkii hore oo dhan, waxayna arrintaas soo jiidatay indhaha caalamka.
Markabka oo la yiraahdo Diciotti ayaa yimid dekedda Sicily ku taalla ee Catania isniintii, laakin ilaa Sabtidii shalay ahayd, tiro aad u yar oo dad ah ayaa loo ogolaaday inay Talyaaniga galaan, waxaana ku jiray carruur aysan cidina la socon iyo dad xanuunsan, kuwaasoo laba ka mid ah la sheegay in ay qabeen cudurka qaaxada.